Anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ wijetị WhatsApp na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi tinye wijetị WhatsApp na ihuenyo mkpọchi na gam akporo
Mmanya na-egbu egbu | | android, Mobiles, WhatsApp
Iji jiri nke a dị mkpa atụmatụ dị ka inwe ike itinye a WhatsApp wijetị na Kpọghe ihuenyo Iji nweta ozi gị ozugbo, ịkwesịrị inwe Android 4.2 ma ọ bụ karịa, ebe ọ bụ na nsụgharị ndị a ebe a na-akwado wijetị.
Buru n'uche na ọ bụrụ na ịgbalite ngwaọrụ WhatsApp a, onye ọ bụla nwere ike ịnweta ekwentị gị Will ga-enwe ike ịnweta ozi site na ọkacha mmasị gị ozi ngwa, n'ihi ya, ọ bụ ihe mara tupu.Ọtụtụ jiri gam akporo ekwentị iji kwurịta okwu site na ọrụ izi ozi ama ama akpọrọ WhatsAppYa mere, inwe ike ịnweta ngwa ozugbo oge agbanwuru ngwaọrụ ahụ nwere ike ịdị mkpa maka ụfọdụ.
Ihe mbụ ị ga - eme iji rụọ ọrụ wijetị bụ ịga na ntọala na WhatsApp na udi nke activma Ọkwa rụọ ọrụ na "Ngosipụta popup" nhọrọ "Na-egosi popup element". Site na nke a, ị ga-enweta ihuenyo ahụ ọbụlagodi igosi na izi ozi dị na ajụjụ, fọdụrụ na mkpọchi ihuenyo oge ọzọ ị meghere.
1 Na gam akporo dị ka ọkọlọtọ
2 Ngwaọrụ Galaxy
Na gam akporo dị ka ọkọlọtọ
Ọ BR you na ị nwere gam akporo dị ka ọkọlọtọ na ngwaọrụ Nexus ọ bụla ma ọ bụ AOSP ROM, ị nwere ike rụọ ọrụ wijetị na mkpọchi ihuenyo nke WhatsApp.
Nke mbụ, ị ga-aga Ntọala> Nche na ụdị nchekwa nke ihuenyo ahụ, gbanye nhọrọ iji mee ka wijetị.
Ugbu a, ị ga-aga na mkpọchi ihuenyo nke ọnụ na site na etiti ị na-eme ngosipụta n'akụkụ. Ga-ahụ + akara ngosi. Pịa na ya wee họrọ WhatsApp site na listi ga-apụta.
Oge ọzọ ịgbanwuo ngwaọrụ ahụ, wijetị WhatsApp ga-apụta. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ị nwere wijetị ọzọ na ihuenyo mkpọchi, ịnwere ike ịhọrọ nke ịchọrọ ịpụta dị ka isi ihe oge ọ bụla ị gbanyere ọnụ ya.
Ọ bụrụ na ị nwere a Galaxy ngwaọrụ na a ọhụrụ version site na gam akporo ị nwere ike ịnweta wijetị dị ka ụdị nke gam akporo.
Gaa na Ntọala> Mkpọchi ihuenyo> Nhọrọ mkpọchi ihuenyo ma mee ka ụzọ mkpirisi rụọ ọrụ, wee pịa ebe ọ na-ekwu ụzọ mkpirisi wee họrọ WhatsApp site na listi ahụ.
Nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị ahụ mkpa ka ị ngwa ngwa nweta ozi WhatsApp na-enweghị na-aga site gara aga nzọụkwụ nke akpọchi ngwa na mgbe na-aga ngosi mmanya iji nweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi tinye wijetị WhatsApp na ihuenyo mkpọchi na gam akporo
Otu esi ahazi BIOS iji gbochie ịnweta Windows
Fọdụ n’ime iwu kacha baa uru maka ọnụ OS X na Mac